Podolski oo ugu baaqay Schweinsteiger inuu ka ciyaaro Horyaalka Mareykanka – Gool FM
(Manchester), 26 Sebt. 2016 –Xidiggii hore ee kooxda Arsenal, Lukas Podolski ayaa ugu baaqay saaxiibkiisii hore ee Qaranka Jarmalka Bastian Schweinsteiger in marka uu ka dhammaado waqtigiisa Manchester United uu aado Horyaalka Mareykanka ee MLS.
Podolski oo la hadlayay wargeyska ‘Bild’ ayaa waxa uu yiri “Waxaan u malaynayaa in Schweinsteiger ay u fiican tahay Mareykanka, u baqoolidda dibadda waxay u wanaagsan tahay horumarkaaga shaqsi ahaaneed sidoo kale waxay u fiican tahay carruurteenna”.
“Dhab ahaantii waxay noqonaysaa mid suurtogal ah in uu Schweinsteiger ka dheelo USA, waxa ku dhacaya Schweinsteiger waa mid aan caddaalad ahayn” ayuu sii daba dhigay Weeraryahanka Galatasaray Podolski.
Schweinsteiger oo 32 jir ah oo aan boos ka heysan safka hore ee Manchester United ee uu hoggaamiyo tababare Jose Mourinho ayaa waxa uu bishii kooxda ka qaataa 200,000 Giniga Istarliinka ah.
Ciyaaryahan Schweinsteiger ayaa tan iyo bishii July waxa uu la tababaranayay 23 jirada Manchester United, waxaana keliya uu MU u ciyaaray 18 kulan oo qura tan iyo markii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay uu heshiis 3 sanadood ah u saxiixay kooxda.
Tottenham oo waayi doonta 5-laacib oo ka mid ah safkeeda hore kulankeeda habeen dambe ee Champions League
Griezmann; "Waxaan taageeraa oo aan ku daysadaa David Beckham waana taas sababta aan u xirto funaanadda gacma dheeraha ah"